Casho sagootin iyo dardaaran ah oo Gudoomiye Cirro la qaatay Fulinta Xisbiga Waddani UK | Salaan Media
Xaflad qurux badan oo uu Gudoomiye Cirro ku sagootinayey Gudiga Fulinta Waddani UK, ayaa xalay (23/04/12) ka dhacday Savannah Restaurant, Galbeedka London. Mudane Cirro ayaa mahad balaadhin u celiyey Gudigii qabanqaabada iyo xubnihii soo agaasimayey Xafladii la isku arkey ee Sabtidii hore ka dhacday Lancaster Hotel, London. Wuxu sidoo kale Gudoomiyuhu ku boor iyey dhammaan xubnaha fulinta heer qaran eek u sugan UK iyo Gudiga Xisbiga ee UK inay hawlahooda dar-dar geliyaan.
Gudoomiye Cirro wuxu ku nuux-nuuxsadey doorka xubnaha qurbajooga ee siyaasadda iyo dhaqaalaha xisbiga isagoo ku tilmaamay inay yihiin “aqoon ma guuraan ah iyo lafdhabarta dhaqaaleed ee dalka iyo xisbigaba” waxa sidoo kale goobta ka hadlay xubno ka mida fulinta xisbiga heer qaran iyo Gudiga UK, waxa isna halkaas erayo tusaalayn ah ka yidhi Gudoomiyaha Waddani ee Yurub. Ugu dambayn wuxu Gudoomiye Cirro halkaas kaga dhawaaqay guddi ka kooban 8 xubnood oo dardar gelisa hawlaha Xisbiga ee UK. Kulankaas cashada ahaa ayaa kusoo xidhmay jawi fiican iyo is-afgarad.
Waxa Gudoomiye Ciro uu dhawaanahan ku sugnaa qaaradda Yurub oo uu kulamo farabadan la yeeshay Shacabka reer Somaliland iyo tageerayasha xisbiga Waddani,Waxa kale oo intii uu safarkiisa ku jirey uu ka qayb qaatay shirkii Somaliland iyo Somalia ee horaantii bishan ka dhacay Turkey oo uu gudoomiye Ciro aad uga waramay kuna tilmaamay kulan muhiim ahaa. Madax sar-sare oo ka mid ah Barlamaanadda qaar ka mid ah qaaradda Yurub iyo diblomaasiyiin kale oo caalami ah ayuu la kulmay.